May Nyane: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၂၅)
ချီးမွမ်းခုနှစ်ရက်၊ ကဲ့ရဲ့ ခုနှစ်ရက် ဆိုတာချင်းတူပေမဲ့... အဲဒီ ကဲ့ရဲ့တာကို ခံရတဲ့ ခုနှစ်ရက်က ပိုကြာသလို ခံစားမိတယ်...။
သားလာဖတ်သွားပါတယ် အန်တီမေငြိမ်း..။ (အဲ့လို ခေါ်တာဘ၀င်မကျရင် ပြောပါနော်.. မခေါ်စေချင်ကြသူ များလို့ပါ) .. ဆက်လက်စောင့်စားနေပါတယ်.. အရင်အဟောင်းလေးတွေလည်း သက်သက်လာဖတ်ပါဦးမယ်။ စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့။ အစစ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
ဆရာမ ဓါတ်ပုံတွေလည်းအမှတ်တရစုဆောင်းထားနိုင်တယ်။ စာတွေနဲ့တွဲတော့ တကယ့်ကို အမှတ်တရတွေပါပဲ။ ရေးတဲ့သူပင်ပန်းနေမယ်ဆိုတာသိပေမယ့် ဆက်ဖတ်ချင်နေမိတာက စာဖတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့လောဘကြီးမှုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စာရေးတဲ့သူရဲ့ ခွန်အားစိုက်ထုတ်မှု အရေးအသားပိုင်နိုင်မှုတို့ကြောင့်ဆိုတာတော့ သိပ်သေချာပါတယ်။
Ko Boyz ရေ.. ဟုတ်တာပေါ့။ ပြီးတော့ ကျမစိတ်ထင်.. ဗမာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ချီးမွမ်းတာမျိုးတောင် သိပ်မလုပ်တတ်ကြတော့ဘူးလားလို့။ ဒါပေမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ လွှဲချလို့တော့ မရဘူးပေါ့လေ..။ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်ကျည်မှုလည်း လိုတယ်ထင်တာပဲ။
အသက် ၄၅နှစ် မိန်းမကြီးတယောက်ကို အန်တီခေါ်တာ ဘ၀င်မကျစရာတော့ မရှိဘူးထင်တာပဲ :D ပြီးတော့ အန်တီက ခပ်ငယ်ငယ်ကတည်းကကို အဲလို အခေါ်ခံနေရကျ..။
ရေးရတာက မပင်ပန်းပါဘူး။ ခံစားရတာက ပင်ပန်းတာပါ..။ တကယ်ပဲ တချို့ကိစ္စတွေကိုဆို မေ့ချင်ယောင် ရူးချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်ချင် တာ။ မရေးချင်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ စာလာဖတ်တဲ့ သူတွေ ကိုယ့် အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်ကနေ သိသင့်တာ..ဆင်ခြင်စရာ နဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်စရာ တွေရအောင်နဲ့ Memoir ဖြစ်စေချင်တာကြောင့် ရေးနေရဦးမှာပါပဲ..။ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကနေ ထွက်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၅ ဖေဖော်ဝါရီထိအောင် ရေးသွားမယ်လေ..။ အားရင်အားသလောက်ပေါ့..။
ဆရာမခင်ဗျား။ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုလျက်ပါ။ ၁၉၉၆ ဒီဇင်ဘာ၂ ကနေ ၆ အထိ ငါးရက်တာကာလ ဘားအံမှာ ဘယ်လိုရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေးပါ ရေးပေးပါဦးခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
မငြိမ်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖတ်ရတိုင်း ရင်ထဲမှာတစ်မျိုး ဖြစ်ဖြစ်ကျန်ခဲ့တယ်။ မငြိမ်းကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာမိ တယ်။ မခံစားတတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ သူများလုပ်သမျှပြောစရာဖြစ်နေမှာပဲ။ ကိုယ်တိုင်ထိမှ နာကြတာ။
ဒီရက်တွေမှာ အလုပ်တွေတော့ များနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလထဲမှာ တင်ထားတဲ့ မြသီလာ ၂၁ ကနေ ၂၅ အထိကို နှစ်ခေါက်မက လာဖတ်ပြီးပါပြီ...။
ဆရာမရဲ့စကားလုံးတွေကြားမှာ စိတ်ဝင်တစား လိုက်ပါ စီးမျောပါဝင် ခံစားရင်း ၂၆ ၂၇ တွေကို မျှော်လင့် စောင့်စားပြီး မြန်မြန်ဖတ်ချင်နေတဲ့ စိတ်က ပိုပြီး ကြီးစိုးနေတာ...
မြသီလာ တစ်ခုဖတ်ပြီးတိုင်း Comment ရေးဖို့စိတ်ထက် နောက်ပိုစ့် အသစ်တစ်ခုကို တွေ့ ချင် ဖတ်ချင်တဲ့စိတ်က ပိုများနေတယ်လေ...
(မပြီးသေးတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို ကြည့်ရင်း မှတ်ချက်ချဖို့ ထက် ပန်းချီကားလေး အပြီးသတ် ပုံပေါ်လာအောင် ကြည်ကြည်နူးနူး စောင့်ကြည့်ချင်နေတဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့ခပ်ဆင်ဆင် တူနိုင်မယ် ထင်တယ်...။)
ဒါကြောင့် ဆရာမဆီ ရောက်ရဲ့ သားနဲ့ ဘာမှ မရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။
I do understand your feeling. Life isabook read by page by page and day by day.
You can't avoid or refuse your destiny.
The most important thing very difficult to forget is "LOVE".
We are so glad that your areaMyanmar woman andatrue teacher indeed.
I have read all of your post with heart.
အမှန်ဘဲဆရာမ လူတွေက ကဲရဲ့ ပြစ်တင်တဲ့နေရာမှာတော့ တဖက်ကမ်းခတ်အောင်တော်ကြပါတယ်။
တခါတလေ အဲဒီ့ ကဲ့ရဲ့ သံတွေကဘဲ တခုခုကို တဖက်စွန်းထိ လုပ်ချလိုက်အောင် တွန်းပို့ တတ်တဲ့ အရာတွေဖြစ်လာပြန်ရော။
လင်းကတော့ ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ သူမို့နားလည်တယ် ဆရာမရေ။ မရှိမကောင်းရှိမကောင်းဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပဲ။
အလုပ်ရှုပ်နေလို့ ၂၄ နဲ့ ၂၅ ခုမှ ဖတ်ရတယ်။ ခု ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ အဲဒီတုန်းက တီချယ်ကြီး စိတ်ဓာတ် တော်တော်မာတယ်ပြောရမယ်။ လဲကျသွားနိုင်တဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ..
ထူးမြတ်တို့က ၄ နှစ်သားထဲက ခေသူ မဟုတ်။ ;))
ဆရာမရဲ့ ချုပ်ရိုးကို ဖတ်ပြီး အတော် ခံစားလိုက်ရတာ။
ဆရာမရေ အချစ်နဲ့ ဥာဏ်ပညာကြောင့်ပဲ ဒါတွေကို ခံနိုင်ရည် ရှိခဲ့တယ် ထင်ပါရဲ့။
သယ်ရင်းတွေ ကောင်းတာလဲ ပါပါတယ်အေ...
ဆရာမ...မြသီလာကို အစကနေ ဖတ်ခဲ့သလို နေ့တိုင်းလည်း လာလာကြည့်တယ်။ ဆက်ရေးထားပြီလားလို့ပါ။ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ဖတ်နေပါတယ်။ လွမ်းသုရင်ရဲ့ လက်သွေးခါစ စာတိုလေးတွေကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပြီး သင်ပြသွားတာကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်း များများတွေးနိုင် ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။ ဆရာမ စာတွေဖတ်ရင်း၊ ဆရာမ ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ရင်းနဲ့ ဆယ်တန်းတုန်းက မြန်မာစာသင်တဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်ကို သွားသတိရတယ်။ ဆရာမနဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ၊ အပြုအမူတွေ တူနေသလားလို့ မြင်ယောင်မိလို့ပါ။ ပြီးတော့ ဆရာမက ၂၀၀၅ခုနှစ်အထိ ဒဂုံမှာ ရှိနေသေးခဲ့ရင် အမှတ်တမဲ့များ ဆရာမကို မြင်ဖူးခဲ့မလားတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ လွမ်းသုရင် ၂၀၀၅မှာ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူပဲ ရှိပါသေးတယ်။ Day တော့ဟုတ်ဖူး။ အဝေးသင်ပါ။ နောက်ထပ်အသစ်ရေးဖို့လည်း စဉ်းစားနေသလို မြသီလာကိုလည်း မျှော်နေပါတယ်။ လွမ်းသုရင်ရဲ့ စာတွေမှာ လိုအပ်တာများ ရှိခဲ့ရင်လည်း သင်ပြပေးပါရှင်။ ဆရာမ အဆင်ပြေကျန်းမာပါစေ :)
လူသားနှစ်ဦးကြားက နက်ရှိုင်းတဲ့နားလည်မှု နဲ့Chemistry ဆိုတဲ့ ဒြပ်ကြိုးမြှင်လေးတွေကို လှမ်းမြင် ခွင့်ရလိုက်သလိုပဲ။့ လက်တွဲဖော်..ပါရမီဖြည့်ဖက်.နားလည်မှု..လောကကြီးမှာ လူသားတွေ ကြားထဲ လိုအပ်နေတာလဲဒါတွေ ပဲမဟုတ်လား။
Sorry! Its almost 25th. :)
အမပြောတဲ့ ချီးမွမ်းတာတောင် သိပ်မလုပ်တတ်ကြတတ်တော့ဘူးလား ဆိုတာ မှန်သဗျာ။ သမရတော့မယ်လားဆိုခါမှ ပေါ်လာတတ်တဲ့ လူတချို့ကို စိတ်တော့ ကုန်တယ်။ (စကားချပ်)
ကျနော်က ၉၇ ကျမှ ဘားအံကို ရောက်တော့ အမနဲ့ လွဲတာပေါ့။ ရေးထားတာတွေ ဖတ်ပြီး ဆဒ္ဒန်ဂူကို သတိရလိုက်တာ၊ ရွှေရင်မျှော်တို့ ဇွဲကပင်တို့ကိုလဲ လွမ်းတာပဲ။
ဆရာမ.. သတ္တိရှိရှိနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို...ချီးကျူးမိတယ်။